Biography of Maksima Galkina: indlela eya phezulu
Ngubani Maxim Galkin? Manje wonke umuntu kusuka impesheni ukuba abafundi abasebasha, ukuphendula lo mbuzo. Actor, sijwayeleke, nosomahlaya, umculi - zonke Maxim Galkin. Biography lokuzalwa ngonyaka izingcingo: Diva umyeni yesihlanu wazalwa ngo-June 18, 1976-dolobha.
Okuncane izimpande kanye ebuntwaneni
Maxim wazalwa ngo i, umndeni bokusungula ihlonishwe. Akumangazi, ngoba uyise wayengumGreki amabutho uLieutenant General armored ke wasebenza abasezikhundleni eziphezulu ku eMnyango Wezokuvikela, kwaba iphini Duma State. Talented guy unina owayenguFakazi abaphezulu ucwaningo nabo futhi -PhD. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi Galkin umndeni ngaso sonke isikhathi sokuhamba ngenxa isahluko umsebenzi. Wayehlala iminyaka eminingi e-Germany, bese - e-Odessa. Kwaba kukhona ukuthi Maxim Galkin (biography ibikwe) esikoleni sabaqalayo. Umndeni waphila Transbaikalia. Kodwa-ke konke wabuyela enhloko-dolobha. Ngakho uthi biography of Maksima Galkina. Kusobala ukuthi ukudluliselwa ezinjalo ayikwazanga ibe nethonya phezu umphefumulo zokudala of Man.
Ukuphi amathalenta ezifana
Maksima Galkina biography lisitshela ukuthi esiteji ke Owokuqala waphuma emuva enkulisa. Umfana edlala indima inkukhu. Ngisho nangaleso sikhathi kwakunokwenzeka ukugubha ithalente lakhe undoubted. Eminyakeni esikoleni wonke ukusebenza abangu ehlotshiswe charm Maxim. Lowo wake kuphela kwaba khona enkundleni: Ostap Bender, Earl Nikulin, inja, noma indoda endala, wotshwala. Umfana nazo zonke lezi izindima ngokuthi "omuhle kakhulu". Futhi uma unabangane besimthanda abanye lokho wenza kuvezwa bese elingisa: wonke umuntu, abafundi basekilasini ziphethe uthishanhloko. Lokho kukhona kuphela yokuthi recital umfana zayo zokuqala esisichitha sitadisha ebangeni 6. Futhi eminyakeni engaba ngu-13, ngemuva kokubona ku ukusebenza ithelevishini Gennadiya Hazanova nge ukubayisigebengu we umongameli wokuqala wase-USSR waqaphela ukuthi akusizi sibi kakhulu. Naphezu kwakho konke lokhu, Biography Maksima Galkina ukuthi njengoba ingane wayengafuni ukuba abe umculi.
Yini enye yokwenza lokhu ingane abanamakhono? Waya ekamelweni ubuciko, nesithakazelo kakhulu ngokuma kwezwe wesayensi yempilo yezilwane. Kodwa uma eklasini biology wabona isimiso sokugaya ukudla bungene ngokomongo ejuba, senginqume ukuthi sezilwane kube namanje engafuni. Futhi mina ukhetha inkambo umlobi. Maxim wabhala la mazwi ngomdlandla: inganekwane uhlobo fantasy, ngisho imifanekiso kubo, esibonisa umbuso imilingo. Noma kunjalo, ayemiselwe ukuba abe umculi.
Indlela eya stardom
Lapho wenza DEBUT yakhe phezu qophelo Maxim Galkin? Biography ibika ukuthi kwenzeka ngo-1994. MSU umfundi yaseshashalazini yaba indawo yezimpi Maxim aseqala njengoba parodist. Khona-ke wathatha ingxenye okwamanje kwelinye ukusebenza, kutilolonga posing nabezombusazwe. Khona-ke umsebenzi humorist sathandwa phezulu ngesivinini kakhulu. Wamenywa ukuba aye Theatre Estrada Borisom Brunovym. Bese mayelana nengxenye uhambo ngonyaka ne humorist abadumile Mihailom Zadornovym. Nguye ngokuthi Galkin ngumnikazi "owalandela".
Okulandelayo, a guy abanamakhono uthola okuningi imiklomelo kanye nemiklomelo at imikhosi ehlukahlukene. Kodwa kancane kancane waqala ukubambisana Ingxubevange Pugachevoy. Futhi manje, eqinisweni, asikho leso simiso ukuzijabulisa akuyona ngaphandle iqhaza layo. Futhi Maxim siyaqhubeka ngobuhlakani akhule kuze kube yilolu suku.
Uma sikhuluma ngempilo yakhe yangasese, ukuthi, naphezu kwakho konke lokhu kugxeka nokugxeka, wafting bevela kuzo zonke izinhlangothi, yena eshadile ejabule, Ingxubevange Pugachevoy, ngubani emdala abakhethiweyo. Umshado bona bhalisiwe e 2011, kodwa waqaphela ukuthi sibonane ngaphambili kule minyaka eyishumi edlule. Futhi ekugcineni, emkhayeni muva kwaba senzakalo esijabulisayo - Maxim futhi Alla wazama indima entsha - indima yabazali. izingane ezimbili ebukekayo wabanika nomama wesivumelwano.
Biography of Maksima Galkina - sibonelo esigqamile indlela eyodwa kufanele afune bebodwa, ngeke esachitha ithalente lakhe futhi ukungasinaki nomona.
Sukuma - kuyini? definition
Webrip - ukuthi ikhwalithi? Yini izinga Webrip
Wedding castle njengoba iwuphawu uthando kwaphakade
Indlela yokwenza Ukhala aphume iphepha